जापानमा एकैदिनमा संक्रमितकाे संख्या अहिलेसम्मकै उच्च - NepalKhoj
जापानमा एकैदिनमा संक्रमितकाे संख्या अहिलेसम्मकै उच्च
नेपालखोज २०७८ माघ ४ गते १९:५४
टोकियो । जापानमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या मंगलबार सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा जापानमा ३२ हजार १९७ जना नयाँ संक्रमित भएका छन् ।
यसअघि अघिल्लो वर्षको अगस्टमा एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै २५ हजार ९९२ जना संक्रमित भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । मङ्गलबार सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएका मध्ये टोकियोका मात्रै पाँच हजार १८५ जना रहेका छन् ।
‘टोकियो महानगरभरीमा एकैदिनमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएको पनि पहिलो पटक हो,’ एक अधिकारीले भने । अघिल्लो मङ्लबार ९६२ जना मात्रै सङ्क्रमित भएकोमा एक हप्तामा पाँच गुणा बढेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
पछिल्लो एक हप्तामा महानगरमा मात्रै औसतमा तीन हजार ८५८.६ प्रतिशत सङ्क्रमित भएको देखिएको छ । नयाँ सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी कोरोनाभाइरस विरुद्धको दुवै खोप लगाएका व्यक्ति भएको पनि पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरमा नयाँ नेतृत्व : बालेन्द्र मेयर, सुनीता उपमेयर
सर्वोच्चले सुनायाे श्रीमतीको हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैदकाे फैसला
बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुन: मतदान हुने
दाङमा ठूलो पार्टी बन्यो कांग्रेस
वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १६ गते
प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा ‘दोभासे’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग
काठमाडौंमा तीनदिने कोरोना खोप अभियान, वडाका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा दिइने
वर्षायाममा सचेत बनौं : जोखिममा १७ लाख मानिस, जेठ ३० देखि औसतभन्दा भारी वर्षा
‘मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंकले धितो स्वीकार गर्न सक्ने’
सरकारले भन्यो- नीति तथा कार्यक्रम जनता र राष्ट्रको पक्षमा
२१ जनामा कोरोना, १३ जना डिस्चार्ज
८ अंकले नेप्से बढ्दा ८८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिने सरकारको तयारी
फोर्ब्सले सार्वजनिक गर्यो ५ प्रभावशाली नेपाली युवाको सूची, को को परे त ?
ओलीले भने- चुनावकै बेला सरकारले मूल्यवृद्धिको कीर्तिमान बनायाे
सरकारकाे नयाँ कदमले राहदानी विभाग व्यवस्थित होला ?
७४९ स्थानीय तहको मतगणना सकियाे, ४ पालिकामा जारी